अब सबै एमाले भएपछि तितोपिरो सकियो : गौतम – ramechhapkhabar.com
अब सबै एमाले भएपछि तितोपिरो सकियो : गौतम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपा राजनीतिक रुपमा ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा विभाजित भयो । र, कानूनी लडाईं निर्वाचन आयोगमा पुग्यो । तर, तत्कालीन नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम दुवै समूहमा लागेनन्, बरु आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी एकता अभियान चलाए । पुस २३ मा राष्ट्रियसभामा बोल्दै गर्दा उनले ‘सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको पार्टीलाई वैधानिकता दियो भने एमाले र माओवादी आ–आफ्नो घर फर्कने अवस्था आउँछ’ भनेका थिए ।
गौतमले संसदमै यस्तो आंशका गरेको ठीक दुई महिनापछि फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदियो । दुई दलको एकता भएर बनेको नेकपालाई सर्वोच्चले मान्यता दिएन, परिणाम एमाले र माओवादी केन्द्र आ–आफ्नो घर फर्केका छन् । अदालतको निर्णयले देशको समग्र राजनीति, एमाले र माओवादी केन्द्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका साथै सत्ता समीकरणमै समेत तलमाथि हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसला आएको केही समयमै स्वागत गरेका गौतमले अबको राजनीति, एमालेभित्रको सम्भावित अन्तरसंघर्ष र सरकारको विषयमा धारणा बनाईसकेका छन् । एमाले उपाध्यक्ष रहेका गौतमले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे इकान्तिपुरसँगको कुराकानीमाआफ्नो मत यसरी राखेः
एकताको मोडालिटी गलत हुँदा एकता भंग
सर्वोच्चको फैसलाको मैले स्वागत गरें । यसले हामीलाई पुनः एकताबद्ध गर्छ । हामीले गरेको एकताको मोडालिटी उपयुक्त नभएर नै एकता भंग हुने स्थितिमा पुगेको हो । अब एकता हुँदा मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ । पहिले हाम्राबीचमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक क्षेत्रमा एकता भएरमात्रै सांगठनिक रुपले एकता गर्ने हो । पहिला हामीले गर्नुपर्ने काम नगरेर अरु विषयमा एकता गर्‍यौं । एकतामा सबै ठाउँ भागबन्डा गर्‍यौं ।
एउटा पदमा दुई व्यक्ति राख्ने व्यवस्था गर्‍यौं । त्यसले भावनात्मक रुपमा एकता भएर जाने स्थिति बनेन । यी सबै–सबैले एकता लामो समय टिक्न सकेन । अन्तरविरोध पैदा हुँदा पनि त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय निकाल्न सकिएन । एकताको निम्ति लागेका सबै असफल भइयो । दुई अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरु, महासचिव लगायत सचिवालयका सबै असफल भइयो । तर, अब मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बनाएर कार्यगत एकतामार्फत् संयुक्तमोर्चा बनाएर जानुपर्छ ।
माओवादी केन्द्रसँगै मिलेर सरकार
एमालेको मात्रै शक्तिले सरकार टिक्न सक्दैन, अरु कसैले समर्थन गर्नुपर्छ । मेरो जोडबल माओवादी केन्द्रसँगै मिलेर सरकार बनाउँ भन्ने नै हुन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हुन्छ । हामी नयाँ मोडालिटीमा अगाडि बढ्छौं । सहमति खोज्ने र जाने हो । अहिले केपी ओली सहमत नभइकन त हुँदैन । उहाँ जे विषयमा सहमत हुनुहुन्छ, त्यही बिषयमा हामीले सहमति गरेर जानुपर्छ । अब कमरेड प्रचण्डले त्यहाँ हकदावी गर्नेजस्तो कामचाहिँ गर्न हुन्न । अब त दुई पार्टी भइयो । अब एकतावद्ध भएर संयुक्त मोर्चामा जाऔं भन्ने हो । त्यो मोर्चामा आफ्नो अधिकार हैन, आफ्ना सुझाव राख्ने हो । त्यो सुझावयता (एमालेमा) मान्ने भए लागु हुन्छ । उता (माओवादी केन्द्रमा) पनि हामीले सुझावमात्रै राख्ने हो । उहाँले माने लागु हुन्छ । स्वतन्त्र भइयो निर्णय र कार्यान्वयन गर्न । तर, दुवै पार्टी बसेर संयुक्तमोर्चा बनाएर जाऔं भन्ने ठाउँमा पुगेपछि मात्रै प्रधानमन्त्री निरन्तर भइरहने वा प्रधानमन्त्री आलोपालो गर्ने विषयमा छलफल हुने हो । पहिला त मैले पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको हुँ । अब एमालेमा गईसकेपछि मेरो राजीनामाको विषय हुन्न । बसेर छलफल गर्दा के–के विषय राख्नुपर्छ त्यही राख्छु ।
अब एउटै पार्टी बनाउने प्रयत्न हुँदैन
बृहत्तर एकताको प्रयत्न हुन्छ । सबै कम्युनिष्ट पार्टीबीचमा कुन विषयमा साझा सहमति हुन्छ त्यसैमा आधारित भएर अगाडि बढौं । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो एमाले नै हुन्छ । भूमिका पनि त्यही हिसाबले हुन्छ । तर, सबैलाई गोलबन्द गर्नुपर्छ । एउटै पार्टी बनाउने प्रयत्नचाहिँ अहिले हुँदैन । चुनावमा गठबन्धन, सरकार बनाउँदा कम्युनिष्टको बीचमा साझा सरकार बनाउने, समाजवाद निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी छौं । कस्तो किसिमको समाजवाद निर्माण गर्ने हो त्यसमा सहमति खोज्ने काम गर्छौं । तर नेकपा एमालेमा मिलाउने भन्ने हुन्न ।
सबै एमाले भएपछि तितोपिरो सकियो, तयारी गरेर महाधिवेशन
योबीचको समयलाई सर्वोच्चले अवैधानिक भनेन निर्वाचन आयोगले पनि अवैधानिक भन्दैन । त्यसकारण हामी अवैधानिक हुँदैनौं । तर, तयारी गरेर महाधिवेशन गर्नुपर्छ । अब सबै एमाले भएपछि तितोपिरो सकियो । कोही पनि घरमा झगडा गरेर बाहिर गएको हैन । सँगै बस्दा उत्पन्न भएका समस्या हुन् । नेकपा एमाले हाम्रो घर हो । त्यो घरलाई एक ठाउँ मिसाएका थियौं । मिसाएको घरमा हामी कतै कोठातिर बस्ने गरे पनि घरैभित्र थियौं । अब हाम्रो घर नेकपा एमाले भयो ।
प्रचण्ड कमरेडको घर माओवादी केन्द्र भयो । आ–आफ्ना घर तयार थिए । त्यही घरभित्र हामी सबै आएका छौं । यसमा कसैले जितेको वा को चाँडो आयो भन्ने छैन । जुन दिन सर्वोच्चको फैसला आयो त्यसै दिनदेखि केपी ओली पनि एमाले अध्यक्ष हुनुभएको हो ।
एमालेमा पहिलेभन्दा एकता सुदृढ हुन्छ
एमालेभित्रै एकता त हुनैपर्छ । एमालेमा एकता हुन्छ–हुन्छ । पहिलेभन्दा एकता सुदृढ हुन्छ । किनकी हाम्रा नीति विचारमा केही भिन्नता छैनन् । काम गर्ने शैलीमा केही–केही विषय उत्पन्न हुने हो । विधान, पद्धति, प्रक्रिया मिलेनन् भन्नेबाहेक हाम्रोबीचमा अरु समस्या पहिला पनि थिएनन् । अहिले यी विषय मिलाएर, व्यवस्थित रुपमा जान्छौं भनेर हाम्रो अध्यक्षले भन्नु भयो भने उहाँकै वरिपरि शक्ति गोलबन्द हुन्छ ।
पार्टीभित्रका सबै समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी कमरेड केपी ओलीको हो । उहाँले सहयोग माग्नु भयो भने मैले मेरो क्षमताअनुसारको सहयोग प्रदान गर्छु । स्थायी कमिटी छ । स्थायी कमिटी र पदाधिकारी हुनुहुन्छ । उहाँहरु बसेर छलफल गरेर टुंगो लगाउनु पर्छ । तर सबैभन्दा पहिले गुटबन्दी समाप्त गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा विचार राख्ने हो । त्योभन्दा पहिला अरु कुनै ठाउँमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेर पार्टीभित्र आएर बहस गर्ने काम पूर्णरुपले बन्द गर्नुपर्छ । यो प्रवृत्ति घातक हुन्छ । एमालेभित्र यो प्रयत्न कसैले गर्न हुन्न ।
पार्टीमा म उपाध्यक्ष छु । उपाध्यक्षको नाताले गर्नुपर्ने कामबाहेक अरु काम गर्दिनँ । अब मैले त्यहाँ विशेषखालको भूमिका खोज्दिनँ । पार्टीभित्रका समस्या पार्टीको विधान, प्रक्रियाअनुसार हल हुनुपर्छ । म एमालेको उपाध्यक्ष हुँ । कसैले हटाउन पाउँछ मलाई ? म महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष भएको हुँ ।
माधव नेपाललगायतका नेतामाथिको टिप्प्णी वाहियात
माधव नेपाललगायतको समूह माओवादीबाट एमालेमा फर्किनु भयो भन्ने खालका टिकाटिप्पणी वाहियात हुन् । के एमाले रहिराख्नु भएको हो केपी ओली ? एमालेमा रहिराख्नु भएको थियो केपी ओलीको पक्षमा रहेका साथीहरु ? म त कुनै पक्षमा नगएर पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर फेरि जुटाउन लागेको थिएँ । अरु सबैकोभन्दा बढी हक मेरै छ । बरु नाम नभए पनि मूल ठाउँमा उभिराखेँ ।
मैले हिजो काठमाडौंमा भएका साथीहरुसँग छलफल गरेँ । उहाँहरु सबैलाई हाम्रो एकता अभियान समाप्त हुँदैन, पार्टीले अनुमति दियो भने यसलाई जनवर्गिय संगठन (लुज किसिमको) का रुपमा अगाडि बढाउँछौं भन्ने छलफल भएको छ । यसलाई समाप्त गर्न जरुरी छैन । किनकी हामीले अर्को पार्टी बनाएको हैन । अब मैले सबै साथीहरुलाई जहाँ–जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँका पुराना कमिटीमै बस्नुस् र कमिटी त्यहींभित्र खोज्नु भनेको छु । एमालेमा भएको एमालेमा जानुहुन्छ, माओवादीमा भएको माओवादीतिरै जानुहुन्छ । आफ्नो कमिटीमा बस्नु हुन्छ र सजिलोसँग काम गर्नुहुन्छ ।